Momba anay - Zhejiang Jiuerjiu Chemicals Co., Ltd.
Mba hampiharana ny fanapariahana ankapobeny ny rafitry ny fanavaozana ny orinasa ary mifanaraka amin'ny fandaminana ny asan'ny orinasa, ny marainan'ny 2 martsa 2021, ny orinasa dia nanao ny "Konferansa fanombohana ny fanavaozana ny fotoana maharitra" amin'ny rihana faharoa amin'ny birao. Ny filohan'ny orinasa Andriamatoa Chen Jincai ary ny filoha lefitra Wang Xiaoli Ramatoa Tang Xiangyang, filoha lefitry ny Production, Andriamatoa Wang Ming, mpanorina ny Chengdu Mindao Enterprise Management Consulting Co., Ltd., Andriamatoa Liu Jing, ny mpitarika ny Ny ekipan'ny tetikasa Mindao, sy Andriamatoa He Zongkun, mpanazatra ny ekipan'ny tetikasa Mindao, dia nanatrika ny fivoriana ary ny mpitarika ny ekipan'ny orinasa ary ny mpitantana ambony dia olona 37 no nanatrika ity fivoriana ity, izay notarihin'i Wang Chao, mpitantana ny ny departemanta mividy.
Voalohany indrindra, Andriamatoa Liu, mpitarika ny tetikasa Mindao, dia nanao lahateny: Andriamatoa Liu dia nanazava ny tena dikan'ny sy ny làlan'ny fanovana nataon'ny orinasa tamin'ny lafiny efatra:
1. Maninona no miova: Ny orinasa dia afaka manohy miasa sy mahazo toerana fampandrosoana tsara kokoa, ary ny mpiasa dia afaka mampitombo ny fahamendrehany amin'ny alàlan'ity sehatra ity.
2. Inona no fanovana: fiovan'ny hevitra, fitondran-tena ary fitantanana. Ny asan'ny orinasa dia azo atao manara-penitra, mifototra amin'ny dingana ary miorina amin'ny rafitra.
3. Ahoana ny fanovana: Ampiasao ny fomba 7-dingana an'i Mindao hampiharana hatramin'ny farany ny fanovana.
4. Tsy fahatakarana ny fanovana: amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo tsy fahazoan-kevitra 5, mba hahafahan'ny orinasa mahazo fanatsarana mahomby amin'ny làlan'ny fanovana marina rehefa mandeha ny fotoana!
Mpampianatra Wang Ming avy ao amin'ny Mindao Company dia nanao lahateny: Raha misy firenena na orinasa na olona iray te-hatanjaka aza ary te-handroso hatrany dia misy ihany ny fandrosoana tsy tapaka handrosoana. Raha mijanona izy dia ho faritan'ny tantara, ny fiarahamonina ary ny tsena raha mijanona amin'ny toerany. Esory! Natokana ho an'ny ankizy na olona sasany foana ny fahasambarana! Raha te ho olona matanjaka sy mahomby ianao dia mila miasa mafy!
Tamin'ny alàlan'ny andian-tsarimihetsika sy fahitalavitra "The Great Qin Empire-The Shang Yang Reform", Andriamatoa Wang Ming dia nilaza taminay ny maha-zava-dehibe ny fanovana ny orinasa rehefa mandeha ny fotoana.
Ny Shangyang Reform dia iray amin'ireo fanavaozana nahomby indrindra tany Sina taloha. Tsy nofoanana izy noho ny fahafatesan'i Shang Yang, fa nitohy ihany. Raha jerena amin'ny fomba fijery kely dia nanamafy ny firenena Qin ny Fanavaozana Shangyang ary nanana ny firaisan-kinan'ireo firenena enina. Renivohitra, ny herin'i Qin dia tsy afa-misaraka amin'ny fanohanan'ny Shangyang Reform. Raha jerena amin'ny ankapobeny, ny Qin's Shangyang Reform dia nanome fanampiana lehibe ho an'ny fanavaozana ny taranaka faramandimby.
Ny fanovan'ny orinasa dia ny hampatanjaka ny orinasa, ary misy toerana bebe kokoa ho an'ny fampandrosoana eo amin'ny tsenan'ny lakaoly eo noho eo! Jiro an'arivony maro no tsy misy toa ny tara-pahazavan'ny masoandro, ary rehefa miposaka ny andro, dia azo antoka fa hofongorana avokoa ny zavona. Amin'ny alàlan'ny fandrosoana amin-kerim-po amin'ny lalan'ny fanovana ihany no ahafahantsika manana rahampitso tsaratsara kokoa!
Ny kabarin'i Andriamatoa Chen dia nanondro ny làlan'ny fanovana ary niaraka tamin'izay dia nanamafy ny fahatapahan-kevitra hiova. Matetika dia sarotra ny manao ny tsara satria mety hanova ny andrasan'ny akanjo, ka mila finiavana mafy. Rehefa mandeha ny fotoana, ny fiovan'ny orinasa dia lozika mandresy eo amin'ny orinasa sy ny mpiasa ao aminy. Raha tsy takatry ny mpiasa izany dia midika izany fa misy ny olana amin'ny fahazoany ny zoro sy ny halavany. Tsy ho fanampiana lehibe amin'ny fampandrosoana ny orinasa izany. Ny fanantenana lehibe dia tsy azo apetraka ao aminy, ary ny fandraisana anjara amin'ny ho avy dia tsy azo atao. voafetra. Ka ny tokony hataontsika dia ny mandresy ny vato misakana rehetra amin'ny alàlan'ny lojika ifotony marina, ary mandroso, eo ambanin'ny mekanika mandroso dia misy olona hanaraka tokoa! Rahampitso dia tena misaotra anao anio, misaotra anao nanaraka ny orinasa tamin'ny fotoana nandany fotoana ary nandray anjara tamin'ity fanovana ity! Mitombo sy mandroso miaraka amin'ny orinasa rehefa mandeha ny fotoana! miasa miaraka! Miaraha faly!
Ary farany, teo ambany fitarihan'Andriamatoa Chen! Ny mpandray anjara rehetra dia niara-namaky sy nanao sonia ny “Taratasy fanoloran-tena ho an'ny fanovana ny orinasa”. Tamin'ny fianianana mafy sy lehibe dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana ny orinasa.